Chelsea oo wajihi jirta dacwad kaga timaada xiriirka FA kaddib kulankii xalay ee Liverpool…(Maxaa dhacay?) – Gool FM
“Ma dareemeyno maqnaanshiyaha Virgil van Dijk” – Alisson Becker
Mustaqbalka Ozil oo shaki wayn soo galay kaddib markii uu ka tagay UK una duulay Turkiga….+SAWIRRO
Vázquez oo ka hadlay sababta ay ugu hor dhibtootay Real Madrid kulankii ay guuldarada kala kulmeen kooxda Girona
Muxuu ka yiri Scholes suurtagalnimada uu ku sii leylin karo tababare Solskjær kooxda Manchester United???
Zidane oo qabanaya Xilka Chelsea haddii ay soo dhammeystiraan 3-dan Shuruud
Cafu oo si weyn u difaacay Marcelo, isagoo dhinaca kale iska diiday in Messi lala bar-bardhigo xidigaha sida….
“Waan garanayaa sida loola ciyaaro Bayern Munich” – Naby Keita
Chelsea oo wajihi jirta dacwad kaga timaada xiriirka FA kaddib kulankii xalay ee Liverpool…(Maxaa dhacay?)
Byare February 1, 2017
(England) 01 Feb 2017. Chelsea oo xalay booqatay gegada Anfield ayaa dhibic muhiim ah kala soo laabatay inkastoo ay badin kartay kaddib rigooradii uu ka khasaariyay Diego Costa daqiiqadihii ugu dambeeyay kulanka.
Laakiin Blues ayaa wajihi karta dacwad kaga timaada xiriirka kubbada cagta Ingiriiska kaddib markii ay taageerayaashooda dhalo khamri ah ku soo tuureen Georginio Wijnaldum mar uu u dabaal degayay goolkii uu bar-baraha ugu keenay kooxdiisa Liverpool.
Xiddiga reer Holland ayaa ku dabaal degayay dhanka taageerayaasha Liverpool markii uu bar-baraha u keenay laakiin waxaa dhankiisa lagu soo tuuray dhalo khamri ah waloow aysan ku dhicin.
Chelsea ayaa iminka 9-dhibcood oo nadiif ah ku heysa hogaanka Premier League maadaama ay Arsenal guul daro lama filaan ah ka soo gaartay Watford iyadoo xitaa ku ciyaareysa garoonkeeda Emirates.
Suuqa kala iibsiga xiddigaha oo xalay la soo xiray, yaa yimid yaase ka tagay tagay kooxda Manchester United?
“Xitaa uma diyaarsaneyn.”. David Luiz oo ka hadlay laadkii xorta ahaa uu xalay ka dhaliyay Liverpool
Barnaamijka Muuqaalka Maanta Gool Tv Racwi Salad Muuse https://t.co/wlvZE9jgKT
DAAWO MUUQAAL: Maxaa helay kulankii SOMALIA vs ERITREA ee Shalay lagu waday inuu ka dhoco MUQDISHO? https://t.co/kM9dTtDLNA
Thiago Silva oo ku amaanay Kylian Mbappé waxqabadkiisa wanaagsan ee kooxda PSG https://t.co/40mVX0iEAV